Tondra am-alika tsara indrindra: Arovy ny valahanao sy ny lohalika | Tontolo alika
Susana godoy | | Fitaovana alika
Ny làlan'ny alika dia famenon-javatra tonga lafatra ho an'ny biby fiompinay. Araka ny eritreritray azy dia ho fomba mora kokoa io rehefa miakatra na midina avy amin'ny toerana sasany. Raha tokony hitsambikina ianao dia te hiaro ny taolanao sy ny fahasalamanao amin'ny ankapobeny bebe kokoa, noho izany tsy azonao adinoina ny hevitra toy izao.
Hihaona isika sombina fisaka ary azo vitaina amin'ny vy ary koa hazo na plastika mihitsy aza. Saingy izy rehetra dia hanao ny asan'ny fanampiana ny alikantsika hiditra amin'ireo toerana somary avo kokoa. Tonga ny fotoana filokana amin'ny fanampiana manokana toa an'io!
1 Ny làlana tsara indrindra ho an'ny alika
2 Maninona no mora ny mampiasa arofan'alika
3 Tombontsoa amin'ny fampiasana lalamby alika
4 Fampiasa matetika amin'ny alàlan'ny alika
4.1 Mandehana eo ambony fandriana na sofa
4.2 Midira ao anaty fiara
4.3 Mialà amin'ny pisinina
5 Ny fiompiana alika izay anoroana hevitra ny hampiasa arabe
6 Aiza no hividianana lalamby alika mora vidy
Ny làlana tsara indrindra ho an'ny alika
Ireto ambany ireto dia manana safidin'ny tady tsara indrindra ho an'ny alika ianao mba hanampiana anao hitahiry amin'ny fividianana amin'ireto tolotra ireto:
Holtaz Dog Ramp ...
WilTec Dog Ramp ...
TRIXIE Dog Ramp
Pawhut Ramp ho an'ny alika...
PetSafe Ramp ...
Tohatra hazo Pawhut ...
Maninona no mora ny mampiasa arofan'alika
Satria fanampiana lehibe ho azy ireo izany. Ho an'ny alika kely satria h sorohinay izy ireo tsy hanao ezaka be rehefa miakatra amin'ny sehatra toy ny sofa. Satria ho azy ireo dia asa sarotra io, na rehefa tsy maintsy miditra amin'ny dingana vitsivitsy izy ireo. Fa etsy ankilany, tsara ny mampiasa ny arofan'alika rehefa antitra izy. Hatramin'io fomba io dia hampihena ny fotoana tsy maintsy hitsambikinan'izy ireo amin'ny lafiny iray.
Inona no ho vitantsika amin'izany? Sakano ny vatanao tsy hijaly ary tsy hihetsika ny fanaintainana tamin'ny fanovana voalohany. Betsaka ny biby mijaly amin'ny aretin-tratra rehefa mandeha ny fotoana, koa raha izany no izy dia ho iray amin'ireo fanampiana lehibe mety hanananao ny lalambe. Mety hizaka ny fijaliana mihoatra noho ny ilaina amin'ny fihetsika ataon'ny biby fiompy ny tonon-taolana, ka tonga ny fotoana miloka amin'ny fampiononana. Tsy mieritreritra ve ianao?
Tombontsoa amin'ny fampiasana lalamby alika
Aza atao solafaka: Satria efa fantatsika fa rehefa mitsambikina ny alikantsika dia mety tsy marina izy ireo ary miverina amin'ny tany indray. Ka amin'ity tranga ity dia hisoroka ireo olana rehetra ireo ny arofan'alika.
Afaka miakatra na midina amin'ny toerana avo kokoa izy ireo: Raha tena kely ny alikanao na angamba antitra kely dia ho sarotra aminy ny hidina amin'ny sofa na eny am-pandriana mihitsy aza. Noho izany, fanampiana fanampiny dia tsy mandratra mihitsy.
Tsy mila mitazona azy ianao: Raha isaky ny te-hipetraka amin'ny sofa ianao dia tsy maintsy mandray azy eny an-tsandrinao, miaraka amin'ny arofanina dia tsy ilaina intsony izany. Ka manome alika bebe kokoa an'ilay alika koa.
Hisoroka ny fanaintainan'ny lamosina: Fantatry ny rehetra fa misy karazana alika sasany izay manana olana amin'ny lamosina, ary koa olana amin'ny taolana na ny tonon-taolana. Indraindray izy ireo no karazany kely indrindra. Ny cakramanao dia mety ho lasa mafy ary hanana fahalemena bebe kokoa. Alohan'ny hitrangan'izany dia mila lalambe izy ireo.
Fampiononana ho an'ny alika antitra: Raha mila azy ny kely dia mbola mandroa ihany ny zokiny. Azon'izy ireo antoka fa nanana akanjo sy rovitra be nandritra ny androm-piainany ary ankehitriny dia mila taona mangina vitsivitsy kokoa. Noho izany dia hisoroka ny ezaka hatrany isika.
Ampio ny alika voan'ny aretin-tratra: Raha manana an'io aretina io izy ireo ary mitsambikina mandritra ny andro, dia afaka mahazo azy ireo ny fanaintainana lehibe. Ka eo am-pelatanantsika ny fampitsaharana an'io toe-javatra io.
Fampiasa matetika amin'ny alàlan'ny alika
Mandehana eo ambony fandriana na sofa
Zavatra efa noresahintsika io, fa raha mieritreritra ny fampiasana ny arabe ho an'ny alika isika dia tonga ao an-tsaina indray. Fihetsika izay tian'ny biby rehetra atao. Rehefa tonga eo am-pandriana na amin'ny seza izy ireo dia mila mitsambikina tsara izay tsy mifarana tsara foana. SATRIA Miankina amin'ny karazany ary na amin'ny taona aza, dia mety hiteraka olana amin'ny lamosina, taolana amin'ny ankapobeny ary hatramin'ny olana amin'ny hatoka aza.
Midira ao anaty fiara
Relaxdays Ramp ho an'ny...
Raha mandeha mitsangatsangana miaraka aminy isika na mitondra azy any amin'ny vetAzontsika atao koa ny mihazona ny lalambe alika. Satria manokatra ny varavarana aoriana ianao na angamba ny vatan-kazo ary mametraka azy eo an-tsisiny. Araka izany, hiakatra ny biby fiompinao nefa tsy misy fanoherana izany. Tsy azonao ny misambotra azy eny an-tananao ary tsy tokony hitsambikina izy satria efa hitantsika fa tsy mahomby io.
Mialà amin'ny pisinina
Ny fahafahanao manosika ny tenanao hiala ny pisinina dia mety handany vola amintsika aza. Mikasika ny biby fiompinay koa. Raha manana arofan-alika ianao dia azonao apetraka amin'ny iray amin'ireo sisiny. Mba hahafahan'izy ireo ho avy sy mandeha araka izay tiany, nefa tsy mila mijery ianao. Inona koa, manolotra fampiononana lehibe sy dips bebe kokoa ho azy ireo izahay tsy reraka haingana be.
Ny fiompiana alika izay anoroana hevitra ny hampiasa arabe
Efa nilaza sahady isika fa ny alika kely lava ary lava koa dia mila sisin-tany. Tena zavatra tsara indrindra tokony hialana amin'ny hoe manandrana mafy izy ireo rehefa te-ho tonga amin'ny toerana iray. Etsy ankilany, milaza ihany koa izahay fa izay rehetra mijaly amin'ny karazana olana toy ny valahana na ny vanin-taolana, dia mila fanampiana fanampiny. Inona avy ireo karazana atolotra indrindra rehefa mampiasa tady?
Dachshund: Na dia izy rehetra, na ny maro an'isa aza, fantatsika ho toy ny Dachshund izy. Tongotra tena fohy sy vatana somary lavalava. Izy ireo dia misy mutation izay misy fiantraikany amin'ny fitomboan'ny taolana. Na dia misy karazany maromaro aza dia 9 kilao ny ambony indrindra ho lanjan'izy ireo.
corgis: Iray hafa amin'ireo alika tongotra fohy, na dia manana vatana matanjaka sy ampahany kokoa aza izy ireo, noho ny volony. Mavesatra manodidina ny 12 kilao, olon-dehibe, matetika. Na dia heverina ho karazana tena mahasalama aza izy io, dia marina fa afaka mijaly noho ny dysplasia hip izy ireo, izay midika hoe hanafohezana ny fivezivezena.
Mpiandry Alemanina: Amin'ity tranga ity dia tsy miresaka momba ny alika kely na ny fanafohezana ny tongony isika. Saingy ny Grass Alemanina dia manana aretina lehibe, toy ny fitsipika ankapobeny. Fahita amin'izy ireo ny fijaliana noho ny fivontosana eo amin'ny tonon-taolana sy ny fahalemeny ka miteraka olana mihasimba.
Labrador: Toa tsy afa-bela amin'ny olana iraisana koa i Labradors. Ny fanaintainan'ny iray ihany dia mety hihamafy. Noho izany, ny làlan'ny alika dia hanamora ny fiainanao.
poodle: Fantatra ihany koa ireo olana ateraky ny lamosin'ny poodles. Ankoatry ny aretina isan-karazany dia mety manana fahalemena lehibe koa ny tongony aoriana, izay hahatonga ny fanampiana ho mpitari-dalana tsara indrindra.
Bulldog frantsay: Voalaza fa afaka mijaly amin'ny lamosina sy ny hatoka izy ireo ary very ihany koa ny fahaizan'ny sasany amin'ny tongony na manana fandavana mivantana raha ny resaka mandeha.
Aiza no hividianana lalamby alika mora vidy
Amazon: Rehefa mila sisin-alika ho an'ny alika ianao dia azo antoka fa ho iray amin'ireo safidinao voalohany i Amazon ary tsy gaga izahay. Manana ny zavatra rehetra ilaintsika ny goavambe an-tserasera. Amin'ity tranga ity dia manana zavatra ho an'ny rehetra ianao: Avy amin'ny habe samihafa, miaraka amin'ny famaranana tsy misosa ary na amin'ny endrika tohatra kely aza. Azo antoka fa hahita safidy mety indrindra ho an'ny biby fiompinao ianao.
kiwiko: Ao amin'ity magazay ity dia afaka misafidy làlana tsara indrindra ho an'ny alika koa ianao. Miaraka amin'ny endrika mahitsy na semi-curved mba hahazoana fampiononana bebe kokoa. Fa io kosa ankoatr'izay Azo aforitra izy ireo ka rehefa tsy ampiasainao dia azonao tehirizina ao an-trano, tsy mila toerana be loatra. Raha tsy manadino ireo fitaovana toy ny hazo dia ho mpiorina amin'ity fitaovana ilaina amin'ny volony ity koa.
Fivarotana biby: Ny zavatra tsara momba ny fisafidianana alika amin'ny alika biby dia ny hankafizanao ny fomba maro sy izy rehetra dia azo ahitsy amin'ny haavony. Tena ohatra azo antoka sy azo antoka foana ianao, amin'izay ny alika samy manana lanja samy hafa dia afaka manana fiainana milamina kokoa. Ho fanampin'izany, izy ireo dia voaforon'ny rubber vita amin'ny anti-slip ho fonosana. Ary ianao? Efa manana ny anao ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Lakan'ny alika
Ahoana ny fitondrana ny alika ao anaty fiara
Sakafo alika mahay mandanjalanja: iza no tsara kokoa?